ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » MESA ၏အလယ်အလတ်နှင့်အပန်းဖြေရာနေ့သည်လက်ရှိဝေးလံသောလုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်
ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့်ပါဝင်မှုကာကွယ်ရေး၊ Cloud Technologies နှင့် IT Take Centerstage တွင် NAB ပြရန် နယူးယောက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံ
MESA, an alliance of technology executives, production companies and content creators who are driving the future of the media and entertainment industry, today announced the full lineup of speakers and program for its upcoming M&E Day, which will address the emerging trends and challenges when navigating what’s next in the current remote-work environment, and how ဟောလိဝုဒ် မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီများသည်ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်တိုးတက်ပြောင်းလဲရမည် အွန်လိုင်းအဖြစ်အပျက်ကိုအောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်၊ ည ၁၂း၃၀ မှ ၅ နာရီအထိ ET နှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး၊ အကြောင်းအရာကာကွယ်မှု၊ မူရင်းဒေသနှင့် cloud-enabled နည်းပညာများနှင့်ပတ်သက်သည့်သင်ခန်းစာ ၂၀ ကျော်ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းအစီအစဉ်သည် VideoCoin ကွန်ရက်၏အော်ပရေတာဖြစ်သော Live Planet တွင်တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သော Halsey Minor ပါဝင်သောမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသည့်စကားပြောခန်းနှင့်စတင်မည်ဖြစ်ပြီး blockchain ၏ application အသစ်များနှင့်၎င်းသည်အနာဂတ်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။ အသေးစားကုမ္ပဏီသည် Cnet ကိုတည်ထောင်သူနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကုမ္ပဏီအတွက်အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး မှစီးရီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သည်နည်းပညာအသစ်များ၏မလွှဲမရှောင်ပေါင်းစည်းမှုကိုဆန်းစစ်လိမ့်မည်။ Blockchain မွေးစားခြင်း၏အတားအဆီးများကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်အပြင်သူသည်အနာဂတ်ဖြန့်ဖြူးရန်အခွင့်အလမ်းများအတွက် Data Journey, AI နှင့် Cloud တို့၏အရေးကြီးပုံနှင့်အထူးသဖြင့် Blockchain နှင့် AI ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်မည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာလိမ့်မည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာစွန့် ဦး တီထွင်သူ Shelton Mercer သည် Comcast / တွင်ပေါက်ဖွားခဲ့သော ၂၀း၂၀ စီမံကိန်းအပေါ်အခြေခံသည့်နိဂုံးချုပ်အမှာစကားကိုတင်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။NBCUniversalတက်ရောက်လာသူများကို“ လူမှုရေးဆိုင်ရာစည်းရုံးခြင်း” နှင့်“ စိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့် ဦး ဆောင်ခြင်း” ဟူသောအယူအဆများအားဖြင့်လျှောက်လှမ်းသူများကိုလမ်းလျှောက်သွားလိမ့်မည်။ Mercer သည် Mercer အကြံပေးအဖွဲ့နှင့် Mercer Innovation ၏ဥက္ကchairman္ဌဖြစ်ပြီးကြီးမားသောဒေတာနှင့်မီဒီယာနည်းပညာကုမ္ပဏီ Audigent ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ၊ TwitChange နှင့် The 20:20 Collective ဆုရရှိသောပရဟိတလူမှုရေးမီဒီယာလှုပ်ရှားမှုကုမ္ပဏီ။ ကျော်ကြားသောပရဟိတအလှူရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးခန့်အပ်ခံသင်းအုပ်ဆရာနှင့်အသိအမှတ်ပြုခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်မှုနည်းပြသည်ဒစ္စနေးအတွက်နည်းပညာဖြင့်မောင်းနှင်ထားသောပရိသတ်မဟာဗျူဟာများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ Sony က, အား NBC, Warner Bros. , Jonas Brothers နှင့်အခြားဖျော်ဖြေရေးအမှတ်တံဆိပ်များစွာ။ သူ၏ TwitChange ကြိုးပမ်းမှုသည်ရာနှင့်ချီသောကျော်ကြားသူများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ပူးပေါင်းပြီးသန်းပေါင်းများစွာသောလူမှုရေးမီဒီယာများမှလှူဒါန်းမှုများနှင့်အကြောင်းရင်းများကိုစုဆောင်းခဲ့သည်။
The online event will also featureaseries of more than 20 different panel discussions, presentations and sessions hosted by elite M&E technology providers, all centered around the latest solutions for, and the challenges facing, the industry in the current global remote-work business environment. M&E Day is being produced by MESA, in cooperation with NAB ပြရန် နယူးယောက်နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့၌တည်၏ ပါဝင်မှုပေးပို့ခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးအသင်း (CDSA) နှင့် ဟောလိဝုဒ်အိုင်တီလူ့အဖွဲ့အစည်း (hits) ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအွန်လိုင်းအဖြစ်အပျက်အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင်၊ NAB ပြရန် နယူးယောက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံ။ ပုံမှန်ပရိုဂရမ်မွမ်းမံမှုများအတွက်ကိုနှိပ်ပါ ဒီမှာ.
MESA ၏တန်ဖိုးမြှင့်အဆိုပြုချက်၏အခြေခံအုတ်မြစ်မှာကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်ပဏာမခြေလှမ်းအခြေပြုအသင်းအဖွဲ့များ၊ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့များနှင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့များမှတဆင့်စက်မှုလုပ်ငန်းပူးပေါင်းမှုတိုးမြှင့်ခြင်း၏အားသာချက်ဖြစ်သည်။ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုစီ၏အားသာချက်မှာတည်ငြိမ်။ အော်ဂဲနစ်တိုးတက်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်နှင့်ချဉ်းကပ်မှု၌သမာဓိရှိခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိအသင်း ၀ င်တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောတန်ဖိုးတို့၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။
MESA ၏အလယ်အလတ်နှင့်အပန်းဖြေရာနေ့သည်လက်ရှိဝေးလံသောလုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည် - အောက်တိုဘာလ 16, 2020
ယခင်: Cartoni သည်သက်ဆိုင်ရာနှင့်အဝေးမှဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် PTZ အထောက်အပံ့အသစ်များကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်